चलचित्र लव जोनको गीत “मैले खुशी पाउँदा“ सार्वजनिक
बिजि बर्मा फिल्मस को ब्यानरमा निमार्ण भएको नेपाली कथानक चलचित्र लव जोनको “मैले खुशी पाउँदा“ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ओम बा कार्की को निर्माण तथा शंकर अधिकारी घायलको लेखन एवम निर्देशनमा निमार्ण भएको चलचित्रमा समावेश गरिएकोे । वियोगान्त गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मानविय जिवनको बास्तबिकता अनि जिवनको यथार्थ कथालाई चलचित्रमा समावेश गरिएको छ । शंकर अधिकारी को शब्द तथा टंक बुडाथोकि को संगीत मा गुरुदेव कामत र नित्याशिवाको आवाज रहेको गीत सार्वजनिक भएको हो ।
गायक मनोज धनाडीको आवाजमा “दिलकी रानी”
सुदुर पश्चिमका गायक मनोज धनाडीको आवाजमा डान्सिङ्ग “दिलकी रानी” गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।आफनी दिलकी रानीको मायामा पागल भएको कुरा गीतमा ब्यक्त गरिएको छ । पि एस धनाडीको शब्द तथा संगीत गीतमा रहेको छ । गीतमा केश बडुको एरेन्ज रहेको छ । दिपक गिरी को छायाँकन , निशान एस केको सम्पादन तथा निर्देशन भिडियोमा रहेको छ । “दिलकी रानी ” गीतको भिडियोमा समिर खान र समिक्षा विसीको फिचरिङ्ग रहेको छ ।
फेरि आधा दर्जन एल्बम लिएर आउँदै बी. बी. थापा
हालसालै २७ एल्वम एकैसाथ रिलिज गरी वल्ड बुक अफ रेकर्डस् मा आफ्नो नाम लेखाउन सफल चर्चित तथा बरिष्ठ गीतकार बी बी थापा फेरि आधा दर्जन एल्बम लिएर आउने भएका छन् । यि एल्वमहरुमा चर्चित संगीतकारहरू र गायक गायिकाहरूको स्वर रहनेछ । दशैं गीतबाट रेकर्डिङ शुरू गरेका थापाले आफ्नो एल्बमका गीतहरू संगीत तथा एरेन्ज लगभग आधी भन्दा बढी सकिएको बताएका छन् ।
इन्जिनियर वस्तीको ‘नियात्रा’
केही समयअगाडि बजारमा आएको इन्जिनियर गणेशराज वस्तीको ‘नियात्रा’ नामक यात्रा संस्मरणले कुनै पनि पाठकलाई स्वदेशमै रहेर पनि विदेशबारे भरपूर ज्ञान दिने देखिन्छ । इन्जिनियर भएर पनि नेपाली साहित्यकारले जसरी शब्द चयन गरेका छन् वस्तीले । यात्राको क्रममा वस्तीले व्यक्तिगत रुपमा गरेको अनुभव र भोगाइ शब्दका रुपमा उतार्दा ‘नियात्रा’का पाठकहरुले आफैँले यात्रा गरेजस्तो अनुभूति पक्का पनि गर्ने देखिन्छ । ख्विदेश यात्राका क्रममा अनुभव र भोगाइ मात्र होइन मनभित्रका तरंगहरुलाई पनि शब्दमा उतारेको कारण पुस्तक झनै पढ्नलायक छ । एउटा इन्जिनियर जहिले पनि व्यस्त हुन्छ । त्यो व्यस्तताको बाबजुद पनि यात्राको बारेमा शब्द शब्दमा वर्णन गर्न समय निकाल्न शरीरले मात्र होइन मन र मस्तिष्कले पनि साथ दिनुपर्छ ।
२०७६ सावन ३१
तनहुँका सुमन वाग्ले भित्तेकलामा पोख्त छन् । सानैदेखि चित्रकलामा रुची भएपनि उनले विगत ५ वर्षदेखि भित्तेकलाको काम सुरु गरेका हुन् । लामो कपाल, झुस्स दाह्री पाल्ने उनी दाह्री ग्याङमा पनि आवद्ध छन् । सुमनले विर अस्पतालसँगै सयभन्दा बढी भित्ताहरुमा आफ्नो कला देखाईसकेका छन् । उनको यो कलाले पछिल्लो समय प्रशंसा पनि पाईरहेको छ । बिजनेस स्टडिजका विद्यार्थी उनी अहिले भित्तेकलालाई नै आफ्नो मुख्य पेशा बनाईरहेका छन् । जागिरको लागि कोशिस पनि गरेँ तर चित्रकलामा जस्तो रमाउन सकिन र भित्तेकलामै केन्द्रित भएँ, उनी सुनाउँछन् ।
निर्देशक आदित्य बुढाथोकिको निर्देशनमा रहेको ‘मेरो सास’ म्युजिक भिडियो बजारमा आएको छ । पारिवारिक प्रेम कथामा आधारित रहेको लक्ष्मी तुलाधर को ‘मेरो सास’ नामको म्युजिक भिडियो बजारमा आएको छ । गीतमा शब्द स्वर लक्ष्मी तुलाधरको र संगीत नरेन्द्र प्यासी को रहेको छ भने मुकेश हुमागाईको छायाँकन र प्रकाश एस.के को सम्पादन रहेको छ । भिडियोमा गायीका स्वंम, शेरबहादुर मर्हजन र बाल कलाकार एशिया खड्काले अभिनय गरेका छन् ।
रविनाको सन्देशमुलक गित 'काग दाजै काग दाजै' सार्बजनिक
बरिष्ट गीतकार तथा सर्जक अम्बिका गुरुङको संदेशमुलक शब्दमा सजिएको बाल गीत 'काग दाजै काग दाजै' मा गुल्मीको अद्भुत कला भएकी मिठो स्वरकी धनि ६ बर्षे बालिका रबिना बसेलले आफ्नो जादुमय आवाज भरेकी छिन । कलिला नानी बाबुहरुलाई घरमा छोडेर परदेशिएका बाबाहरुलाइ चाडै घर फर्किन आग्रह गर्दै गाएको यस गीतले जो कसैको मन पगाल्न सक्छ । यति सानो उमेरमा यस्तो बिलक्षण प्रतिभाकी धनि बालगायिकाको अहिले चौतर्फी प्रसंसा हुन थालेको छ ।
'तिम्रो त्यो नसालु' बोलको गीत सार्वजनिक
सन्तोष कालिकोटेको शब्द, सङ्गीत तथा स्वर रहेको गीतमा एरेन्ज भने रिकेश गुरुङको सुन्न सकिन्छ । गायक कालिकोटेको यसअघि 'छटपटि' 'गुन्द्रुक मिठो', जालैमा जालैमा लगायतका गीतहरु चर्चित रहेका थिए । रोमान्टिक शैलीमा बनेको गीतलाई निशान घिमिरे कस्यपले निर्देशन गरेका हुन्। जहाँ जय रसाइली र रिमा बिस्वकर्मा फ़िचर्ड छन् । जहाँ दुईको क्यामेस्ट्री रोमान्टिक देखिएको छ ।
भिमफेदी गाइज र रक्षा श्रेष्ठ को 'लेकैको काने' रिलिज
लामो समयदेखी अमेरिकाको नर्थ डाकोटा फार्गोलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा यात्रा अघि बढाईरहेका प्रतिभावान गायक ललित राईले आफ्नो पहिलो गीत 'लेकैको काने' सार्बजनिक गरेका छन। डि.पी खनालको शब्द रचना रहेको 'लेकैको काने' का संगितकार मनोज थापा मगर हुन् भने देबेश राईले यस गीतमा संगीत संयोजन गरेका छन।
गायिका मन्जु भट्टराइको 'गोरखपुरे रेल' सार्वजनिक
हिन्दु नारीहरुको महान चाड हरितालिका तीज नजिकिँदै गर्दा तीजका गीतहरु बजारमा सार्वजनिक हुने क्रम तिव्र छ। दिनानुदिन धेरै तीजका भाकाहरु नेपाली संगीत बजारमा सार्वजनिक भइरहेका छन। यसै बिचमा गायिका मन्जु भट्टराइको बिल्कुलै नयाँ तीज गीत 'गोरखपुरे रेल' सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गायिका भट्टराइ संगै बसन्त लम्सालको आवाज रहेको छ । भने गीतमा बिक्कु कुँवरको शब्द र गायक लम्सालको लय सृजना रहेको छ। नाँचौ नाँचौ लाग्ने गीतमा रामजी खाँण, सलिना नेपाली र विश्वास नेपालको अभिनय रहेको छ ।
दीपा तामाङको 'म त छम्म छम्म गर्दै नाच्नेु ' भिडियो
अमेरिकाको ब्यस्त दिनचर्या संगै नेपाली गीत सगीत क्षेत्रसंग नजिक रहेर म्युजिक भिडियोको काम गरिरहेका निर्देशक नरमान राइको निर्देशनमा म त छम्म छम्म गर्दै नाच्नेु को अफिसियल म्युजिक भिडियो रिलिज गरिएको छ अगस्त २ तारिखमा अमेरिकाबाट सार्वजनिक गरिएको गीतमा गायिका दीपा तामाङको स्वरमा रहेको गीतअमाशी राइको शब्द संगीत रहेको छ।
नरमान राइको निर्देशनमा 'म त छम्म छम्म गर्दै नाच्ने' रिलिज
अमेरिकाको ब्यस्त दिनचर्या संगै नेपाली गीत सगीत क्षेत्रसंग नजिक रहेर म्युजिक भिडियोको काम गरिरहेका निर्देशक नरमान राइको निर्देशनमा 'म त छम्म छम्म गर्दै नाच्ने' को अफिसियल म्युजिक भिडियो रिलिज गरिएको छ अगस्त २ तारिखमा अमेरिकाबाट सार्वजनिक गरिएको गीतमा गायिका दीपा तामाङको स्वरमा रहेको गीतअमाशी राइको शब्द संगीत रहेको छ। 'म त छम्म छम्म गर्दै नाच्ने'मा उदय राज पौडेलको म्युजिक एरेञ्ज रहेको छ ।
चलचित्र साइनोलाई पिजी सर्टिफिकेट
यहि श्रावण २४ गते बाट प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्र साइनोले सेन्सरबोर्डबाट पिजी सर्टिफिकेट पाएको छ । सेन्सर बोर्डले नेपाली चलचित्रकी प्रथम नायिका भुवन थापा चन्दले निर्माण गरेको चलचित्र साइनो हेर्न १६ वर्ष मुनिका दर्शकले अभिभावकको साथ लिनुपर्ने भनेको छ । चलचित्र साइनोले पिजी सर्टिफिकेट पाएपछि पनि निर्देशक रमेश थापाले चलचित्र सबै उमेरका दर्शकले निर्धक्कका साथ हेर्न सकिने बताए ।
लन्डनमा छायांकन गरिएको ”सिरी सिरी बतासैले” तिज गित सार्बजनिक
नेपाली तीज पर्व नजिकिए संगै तीजका गीतहरु आउने क्रम एकदमै बढ्दो छ। यसै पर्वलाई रमाइलो बनाउनको लागी कलाकारहरुले तीज गीतहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन । त्यस्तै प्रवासमा रहेर पनि देशको कला संस्कृति प्रति लगाव राख्नु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा हो। प्रबासी जीवनका वाबजुद पनि स्वदेशी गीत, संगीत र कलालाई माया गर्नु कसैको रोजाई पर्छ भने त्यो सम्मानयोग्य रहन्छ। आजकल र्‍याप, पप र आधुनिक गीत, संगीतमा झुकाव राख्ने नयाँ पुस्ता लोकभाकामा रमाउनु आफैमा गर्वको बिषय पनि हो ।
तीज गीत ‘नारी’
२०७६ सावन १४
भनिन्छ नि, आमा बाबु बाहेक संसारमा सबै थोक पाईन्छ । आफ्ना सन्तानको भविष्य उज्जवल बनाउनको लागी बाबु आमाले ज्यादै दुःख कष्ट गरेका हुन्छन् । अझ बाबुको सानैमा मृत्यू भएपछि एक्ली बनेकी आमाले झन ठूलो कष्ट र बेदना सहनु पर्ने हुन्छ । छोरा पढेर ठूलो मान्छे हुन्छ भन्ने अभिलासाले भोको पेटमा पटुकी कस्दै हुर्काएकी आमाले छोराबाट धेरै आशा र अपेक्षा गरेकी हुन्छिन् । एक दिन छोराको अमेरिका भिषा लाग्छ २ बर्षको अमेरिका बसाईपछि छोरा गाउँमा फर्किन्छ । आमालाई पनि अमेरिका लैजाने भन्दै फकाएर सबै घर जग्गा बिक्री गर्छ ।
'न बचाउन सके' गीत सार्वजनिक
विकाश लामिछाने, रक्षा श्रेष्ठ फिचर्ड न बचाउन सके सार्वजनिक भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा प्रदेश नम्बर एकका मुख्य मन्त्री शेरधनराईले सार्वजनिक गरेको सो गीतमा समावेस गरिएका दृश्य तथा शब्द निकै भाभुक बनाउने किसिमका छन्। गीतमा एलिश खनालको समेत अभिनय रहेको छ । तुलसी सिवाकोटी स्वर, दुर्गा प्रसाद रिमालको शब्द रहेको गीतमा कल्याण सिंहको संगीत रहेको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै सार्वजनिक गरीएको गीतलाई दिनेश श्रेष्ठले एरेन्ज गरेका हुन् । प्रकाश धितालको निर्देशनमा बनेको भिडियोमा विकाश र रक्षालाई श्रीमान श्रीमतीको रुपमा देख्न सकिन्छ ।
राजेश पायल राई र सुनिता थेगिमको आवाजमा ”माथी है पर्यो ” गीत सार्वजनिक
राई इज किङको उपाधि पाएका गायक राजेश पायल राई र गायिका सुनिता थेगिमको आवाजमा ”माथी है पर्यो ”हरि प्रसाद खनालको शब्द तथा डि आर अटुको सङ्गीत संयोजनमा रहेको गीतको भिडियो लिम्दुमी क्रियसन मार्फत सार्वजनिक भएको छ । मायाका नवीन यात्राहरूलाई गीतमा समेटिएको छ । गीतमा मायालु जोडीको भूमिकामा गायक तथा गायिका भिडियोमा रहेका । आफनो मायालाई साकार बनाउनको लागी आफनो घरमा नै आउन गायिकाले आग्रह गरेकी छन ।
लोकप्रिय लोक तथा दोहोरी गायिका सुनिता अधिकारीले शहरका महिलाहरुको कथा समेटिएको रमाइलो तीज गीत ‘चुरा’ सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
तारा अधिकारीको तीज गीत 'आउ संगी'
गीतकार तारा अधिकारीको तीज गीत 'आउ संगी' .... सार्वजनिक गरिएको छ । निकेश राई र कविता श्रेष्ठको स्वर रहेको गीतमा रमेश कडरियाको संगीत छ । सुमन केसीको संगीत संयोजनमा तयार गीत ए वान रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको हो । गीतको भिडियोमा सागर लोप्चन, दिपसिखा अधिकारी लगायत अन्यले कम्मर मर्काएका छन् । भिडियोको छाँयाकन रामेश्वर हुँमागाईले गरेका छन् । गीतमा सिता राईको कोरियाग्राफी रहेको भिडियोमा सम्पादन नहकुल खड्को छ । तारा अधिकारीले यो भन्दा अघि आधुनिक गीतमा कलम चलाउँदै आएकी थिइन् । उनी चाँडै नै आधुनिक गीतको एल्बम बजारमा ल्याउने तयारीमा छिन् ।
शान्ति श्रीको स्वरमा प्रिन्सा खड्काको पहिलो अभिनय
गित संगीतमा छुट्टै परिचय बनाएका युवा गायक तथा मोडल जय देवकोटाको नयाँ गित बर्खा-२ सार्वजनिक भएको छ । अहिलेकि चर्चित गायिका शान्ति श्री परियार र जय देवकोटाको स्वर रहेको उक्त गितको लय तथा शब्द पनि जय देवकोटा स्वयं कै रहेको छ । स्टुडियो तरङ डिजिटल मार्फत रेकर्डिंग गरिएको बर्खा-२ मा रमा थपलिया, जय देवकोटा, काजल, बाल कलाकारहरुमा मिनी मोडेल वल्ड-२०१९ प्रिन्सा खड्का र अभिनव के.सि.ले अभिनय गरेका छन् । मदन खड्काले डिरेक्सन गरेको उक्त भिडियोको सिनेमाटोग्राफी बिरेन्द्र भट्टले गरेका हुन भने एडिटिंग अनिल रानाले गरेका छन् ।